Birao Scaffold tsara indrindra- Mpanamboatra thermoplastic sy orinasa | Wanhoo
Ny fampidirana ny tabilaon'ny Scaffold mitambatra Honeycomb
nahoana isika no mampiasa an'ity firafitra ity
Anisan'izany ny famolavolana bionika avo lenta. Raha fintinina, ny fanambanin'ny sela tsirairay avy amin'ny atin'ny tantely hexagonal dia misy rhombi telo mitovy. Ireo rafitra ireo dia "mitovy tanteraka" amin'ireo zoro voatanisa matematika maoderina.
Ary io no rafitra ara-toekarena indrindra. Ny tabilao vita amin'ity fototra ity dia manana tanjaka avo, lanja maivana, fisaka avo, fahaiza-manao lehibe ary matanjaka be, ary tsy mora ny mitondra feo sy hafanana
Teo aloha: Strap tank-fuel thermoplastic